Category: ကြွင်းသောအရာ 0
Navigator အဓိကအ Dream ဖက်ရှင် ကျန်းမာရေး Recipes အကြံပြုချက်များ လက္ခဏာများ 12>> Category: ကြွင်းသောအရာ သံချို့တဲ့ခြင်း - ရောဂါလက္ခဏာများ သံဖြင့်ချို့တဲ့ခြင်းမှသည်အဓိကအားမှုကြောင့်အစားအသောက်များတွင်အတွက်အမှားအယွင်းများခြင်းငှါ, ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ 30% ကြုံတွေ့နေကြရသည်။ သံ၏မရှိခြင်းသံဖြင့်ချို့တဲ့ခြင်း, သွေးအားနည်းရောဂါသို့မဟုတ်ရိုးရိုးသွေးထဲမှာသံဖြင့်ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောသွေးအားနည်းရောဂါအဖြစ်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်, ကသွေးအားနည်းရောဂါ၏အသုံးအများဆုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ သံဖြင့်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအကြီးစားဖြစ်ရပ်များ၏အကြောင်းတရားများ၏လက္ခဏာများကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ သံဖြင့် မရှိခြင်းသည်အကြောင်းရင်းများ ကျနော်တို့ကဆိုသည်အတိုင်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသံဓာတ်မရှိခြင်း၏လက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာသည်လူအပေါင်းတို့အထက်, ညီမျှမှုအစားအစာ၏ပြော၏။ သက်သတ်လွတ်စား - သွေးအားနည်းရောဂါများအတွက်ပထမဦးဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ, သံ၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ကိုအမဲသားသည်, အပင်အတွက်ကြောင့်ပါရှိသည်သော်လည်း, ဒါပေမယ့်ပုံစံအများကြီးလျော့နည်းစာလူ့ခန္ဓာကိုယ်အဘို့ဖြစ်၏ အဖြစ်။
အပျိုဖော်ဝင်စ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်နို့စဉ်အတွင်းနှင့်သွေးဆုံး - ထို့အပြင်ခုနှစ်, သံချို့တဲ့သွေးအားနည်းရောဂါ (IDA) ၏အကြောင်းတရားများလေးလံသောအသှေးကိုဆုံးရှုံးမှု, အသွင်ကူးပြောင်းအသက်အရွယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကမ္မကိုအဓိကအပြောင်းအလဲတွေကိုမြင့်မားသောသံဖြင့် content တွေကိုမလိုအပ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ လက္ခဏာများ IDA မအမျိုးသမီးတွေအတွက်သံချို့တဲ့ခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများယောက်ျားဒါမှမဟုတ်သားသမီးအတွက်အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းနှင့်အတူအများကြီးကွာခြားချက်မရှိကြပါဘူး။ တစ်ခုတည်းသောကွာခြားချက်ကြောင့်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုဆိုင်းငံ့မဆိုဒြပ်စင်၏မရှိခြင်းနှင့်အတူကလေးငယ်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပညာရပ်၌, သွေးထဲတွင်သံ၏မရှိခြင်း၏လက္ခဏာများနှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး - တစ်ဦးသွေးထဲမှာနေတဲ့လိုငွေပြမှုနဲ့ဆက်စပ် element ကို, ဟေမိုဂလိုဘင်, ဒုတိယ - အင်ဇိုင်းတွေ၏စုပေါင်းသံချို့တဲ့ခြင်းနှင့်အတူ ။
မရသောအခါဟေမိုဂလိုဘင်အတွက်ချို့တဲ့ခြင်း (သံ, သံ - အောက်စီဂျင်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ဟေမိုဂလိုဘင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု,): မူးဝြေခင်း, အစွမ်းသတ္တိ၏ အားနည်းခြင်း, မရှိခြင်း, ထိနမိဒ္ဓ;
မိန်းကလေး စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ဆင်မြန်း မိခင်များ၏ ဘယ်သူမျှမသူမ၏အနည်းငယ်မင်းသမီးကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး - အလှဆုံးနှင့်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး!
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်လိပ်ခေါင်း၏ကုသမှု မ haemorrhoids တစ်ရောင်ရမ်းခြင်းတိုးလာသဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရောဂါ, အဖြစ်စအိုလမ်းကြောင်းအတွက်ပြည်တွင်းရေးသွေးထွက်သွေးပြန်ကြော plexus ခေါ်ကြသည်။ ဤသည်ကိုတိုက်ခိုက် - လူသားများတွင်တစ်ဦးမျှမျှတတဘုံဖြစ်ရပ်ဆန်း။ မကြာခဏမျှော်မိခင်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအထိခိုက်မခံပြဿနာလည်းမရှိ။ လိပ်ခေါင်းအမျိုးသမီးတွေဟာအီနှင့်အဆင်မပြေပေးသည်ကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမများ၏ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်တင်ဆက်ထားပါတယ်တစ်ဦး, တိုးတက်လာမှာနိုင်ပါမသာဖြစ်ကြ၏။ ဒါကြောင့်သင်ဟာရောဂါစီးနိုငျပါဘူး။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်လိပ်ခေါင်းကုသပေးဖို့ဘယ်လောက်ထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားပါ။ အဘယ်ကြောင့်ငါကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအတွက်လိပ်ခေါင်းကုသမှုလိုအပ်သလဲ?
ဂဏန်းကိတ်မုန် ငါးအ meatballs သို့မဟုတ်ဘာဂါ - ငါတို့အဘို့အစားပွဲပေါ်မှာဂန္ထဝင်ဟင်းလျာများ, ဒါပေမဲ့သူတို့နူးညံ့သောကဏန်းအသား cutlets နှင့်အတူမည်သည့်နှိုင်းယှဉ်ပါမသွားဘူး မ။
သဘာဝကဏန်းအမဲသားကနေပွငျဆငျကွ မ cutlets, ကောင်းသောအရသာ, ဒါပေမယ့်လည်းမြင့်မားတဲ့အာဟာရတန်ဖိုးမသာဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ ပို.
Custard kefir pancakes နေရောင်၏သင်္ကေတအဖြစ်အယူမှားကြိမ်ကတည်းကဖုတ် မ pancake ။ စုံလင်သောနံနက်စာ option ကို - ယနေ့, ဗိမာန်တော်၌ရှိသမျှသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးချိုမြိန် pancake ဘို့, သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများများအတွက် pancakes bakes ။ သူတို့ကချိုမြိန်ခြင်းနှင့် savory pancakes နှင့် custard, ဘုံ kefir, နို့, ရေများမှာရှိပါတယ်, သမားရိုးကျဖြစ်စေခြင်းငှါပြည့်ဝစေနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အလွန်ရိုးရှင်းသောသည်မည်မျှဒိန်ချဉ် custard စာရွက်ပေါ် pancakes ချက်ပြုတ်ရန်သင့်အားပြောပြပါလိမ့်မယ်။ Custard kefir pancakes ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ: မုန့်ညက် -2tbsp .
Lock ဘီလာရုစ် မအလယ်ခေတ်ရဲတိုက်အများအပြားယုံကြည်ပါတယ်အဖြစ်အနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်သာဖြစ်ကြ၏။ ၎င်း၏ပိုင်နက်အပေါ်ရုရှားဖော်ရွေအိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်ဘီလာရုစ်ထက်ပိုမိုတစ်ဦးတရာကွဲပြားခြားနားသောသော့ခလောက်ရှိပါတယ်။ ဘီလာရုစ်ပွနျလညျထူထောငျသငျ့သ​​ညျ 2015 ခုနှရှိသမျှကိုသော့ခလောက်များ၏အဆုံးတိုင်အောင်, ပြည်နယ်အစီအစဉ်အရသိရသည်။ ကသီးခြားအဆောက်အဦယခုအပျက်အယွင်းများသော်လည်း, ဘီလာရုစ်အတွက်ရဲတိုက်တွေအများကြီးအတော်လေးလျက်ရှိသောအသှငျအပွငျဖြစ်ကြ၏။ ဘယ်လာရုစ် Nesvizh ရဲတိုက် မ Nesvizh လစ်၏ရန်း Duchy အတွက်အင်အားအရှိဆုံးမြို့တကြီးနှင့်တပြိုင်နက်။ မြို့သူမြို့သား၏အဓိကဆွဲဆောင်မှု - ထို XVI ရာစုအလယ်မှာ, ဒီဇိမ်ခံရဲတိုက် Radziwill မိသားစုထဲမှာတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဥပစာအတွက်ညားအဆောက်အအုံ၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်၎င်း၏များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ပိုင်ရှင်တွေ၏ဘဝအကြောင်းကိုပြတိုက်ပြပွဲလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ရဲတိုက်၏စာကြည့်တိုက်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးစာအုပ်စုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဘီလာရုစ်အတွက် Radziwill ရဲတိုက် Bialowieza နှင့် Mir ရဲတိုက်၏သိပ်သည်းသစ်တောနှင့်အတူကမ္ဘာအမွေအနှစ်များစာရင်းပေါက်။ ဘယ်လာရုစ် Mir ရဲတိုက် မလာရုစ်အတွက်ကျော်ကြားသမိုင်းဆိုင်ရာ site ကို - ကမ်ဘာ​​ပျေါမှာရဲတိုက်တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံဗိသုကာရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ပါတယ်။ မသင်မနေရသူ၏ခရီးစဉ်တိုင်းပြည်အတွက်လေ့လာရေးခရီး၏အစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ Grodno ဒေသတွင်း၌တည်ရှိပြီးထို XVI ရာစုအလယ်၌တညျဆောကျရဲတိုက်နှင့်၎င်း၏ရှည်လျားသောသမိုင်းတစ်လျှောက်ကျောင်းဝင်းအပေါ်ဖြစ်ပျက်နေသောကိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်.
မွေးကင်းစအတွက် အဆုတ်ရောင် အဆုတ်ရောင်မွေးကင်းစကလေးများအဆုတ် - ကိုအဆုတ်တစ်ရှူးတစ်ဦးကူးစက်ရောင်ရမ်းခြင်း - အသုံးအများဆုံးကူးစက်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာမွေးကင်းစကလေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူအဆုတ်ရောင်ရောဂါမှကြွလာသည့်အခါအထူးသဖြင့်မဆိုဆိတ်သငယ်အဘို့အအန္တရာယ်ရှိသည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းကံမကောင်းစွာနေ့စွဲဖို့စာရင်းဇယားဖြစ်ပါတယ်။ Full-သက်တမ်းအတွက်နှင့်အချိန်မတန်မီကလေး 1% 10-15% အတွက်ရောဂါမွေးကင်းစအတွက်အဆုတ်ရောင် မွေးကင်းစကလေးများအဆုတ်ရောင် ၏ အမျိုးအစားများနှင့်အကြောင်းတရားများ
1 &nbsp;2&nbsp;  &nbsp; >> &nbsp;       အဆိုပါ site ကိုပစ္စည်းများကိုပုဂ္ဂလိကစုဆောင်းခြင်းသည်နှင့်